Home » Music » နားဦးတည့်ရာ နှစ် – J Lennon (Imagine)
John Lennon – Imagine – YouTube
အခုအင်္ဂါဂြိုလ်မှာ.. လူတွေနေဖို့လုပ်နေကြတယ်…။
တယ် ရီရတဲ့ ”လူ”တွေ…
‘‘သူ့အယူက တစ်မျိုးဗျ။ သူပြောဆိုနေတာတွေက ယုတ္တိတော့မတန်ဘူး။ ဘာသာရေးပဋိပက္ခတွေဖြစ်လို့ သွေးချောင်းစီးရန်ပွဲတွေဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံး ဘာသာအားလုံးပျောက်သွားရင် ပေါ်လာမှာက ဖိုးတခေတ်သာသနာလို့ ပြောတယ်။
မယုံကြည်သူတွေရှိသလို ယုံနေတဲ့သူတွေလည်းရှိနေတယ်။ မယုံသူတွေအတွက်ကတော့ သူက ရူးနေတာလို့ ပြောကြတာပေါ့’’ဟု ကရင်တိုင်းရင်းသား စောဖိုးလှကပြောသည်။
Later, five other mobsters attempted to ignite the exploder. All of them were shot dead on the site.There is no casualty during the action. :p:
imagine ရုံသာ တတ်နိုင်ကြသေးတယ်
အိုက်တော့ ဘာသာရေးဆိုတာ အိပ်ငိုက်တာကိုပြောချင်တာလား မတိလို့မေးတာနော်
ဘီဒယိုဒေါင်းလော့အတွက် ကျေးကျေး အံစာ
ဘာသာတရားဆိုတာ လူတွေကို ယဉ်ကျေးအောင်၊ သိမ်မွေ့အောင်၊ အေးချမ်းအောင် ဆုံးမပေးဖို့ဟာ…..
.ဒီနေ့ပဲ ဖေ့ဘုတ်ပေါ် ကိုသစ်မင်းက ဒီသီချင်းလေးအကြောင်းတင်လာတယ်…
.ဒါနဲ့ကျုပ်လည်း ကိုသစ်ကိုဒီလင့်သွားပေးလိုက်သဗျို့..ခီများတို့နှစ်ယောက်အတူတူ.နားဦးတည့်ပုံများတော့အံ့တောင်သြတယ် :))
. ကျေးဇူးပါ မိုက်။
It happened again. :-(((